खाडी तथा मलेसियाबाट नेपाल आउनेहरूको लागि विमानस्थलमा कडाइ ! - jagritikhabar.com
खाडी तथा मलेसियाबाट नेपाल आउनेहरूको लागि विमानस्थलमा कडाइ !
सरकारले केहीदिन अघिबाट विमानस्थलमा चेक जाँचमा कडाइ गरेको छ । त्यो विशेष सुनको लागि हो ।
बुधबारमात्रै विमास्थलबाट करीब १५ किलो सुन संकलन गरिएको हो । यसले त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा अवैध सुन भित्रिरहेको देखाएको छ ।
एकजनाले ५० ग्राम काचो सुन ल्याउन पाइने नियम भएपनि विभिन्न माध्यमबाट सुनका बालाहरु ल्याउनेको संख्या बढ्न थालेपछि कडाइ गर्न थालिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । बुधबारमात्रै विदेशबाट आएका ३ सय २६ जना यात्रुहरुले ल्याएको १५ किलो १६ ग्राम सुनको बाला संकलन गरिएको हो ।
हिजो मात्र विभागले तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी सुन ल्याउनेहरुबाट १ करोड २६ लाख ८७ हजार राजस्व संकलन गरेको विभागको भनाई छ ।
अमेरिकाले चीन, म्यानमार, उत्तर कोरिया र वंगलादेशका दर्जनौं व्यक्ति र उनीहरु आबद्ध संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मानवअधिकार दुव्र्यवहारका घटना बढेको भन्दै चीनले यी देशका केही नागरिक र संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । अमेरिकाको प्रतिबन्धलाई बेलायत र बेलायतले पनि साथ दिएको छ ।
‘हाम्रो कदमले राज्य शक्ति दुरुपोग गरी दमन र पीडा लाद्नेविरुद्ध विश्वभरका प्रजातान्त्रिक देशहरुलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ,’ राज्यकोष मामिलासम्बन्धी सहायक मन्त्री वाले एडियेमोले भने ।
अमेरिकी प्रतिबन्धको चारै देशले कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् ।
कर्णालीलाई गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोगको पर्यायका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । कर्णालीको जुम्ला भन्नासाथ पिछडिएको ठाउँ, अशिक्षा गरिबी नपढेका मान्छे बस्ने ठाउँ हो भन्ने बुझिन्छ । सधैँभरी खान नपुग्ने र गरिबहरूको ठाउँ भनेर चिनिन्छ । तर, पछिल्लो समय जुम्लाले आफ्नो परिचय बदल्दै गएको छ ।
जसको उदाहरण हो, जुम्ला खलंगामा अवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ सेतोकोट लगाएका मानिस हिँड्ने गर्दछन् । जुम्लाले अब सेतो हिउँमा सेतै एप्रोनधारी डाक्टर उत्पादन गर्ने सपना पूरा गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसका लागि २० कोटा छुट्याइएकोमा १९ जना भर्ना भएको छन् भने बी फर्ममा २० कोटा निर्धारण भएको ११ जना, बीएनएसतर्फ १६ जना, बीएमएस तर्फ आठ र बीपीएच तर्फ ६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
हेलिकोप्टरबाट आइतबार बिहान ११ः२० बजे जुम्ला आइपुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम शुभारम्भ गरेकी छन् ।
योसँगै अब विगतमा डाक्टर खोजीखोजी उपचार गर्ने कर्णालीका नागरिकले सेता एप्रोनधारी डाक्टर रोजी रोजी उपचार गर्ने अवसर पाउने भएका छन् । यसअघि रोगी बिरामी पठाउने जुम्लाले अब देशभर उपचारका लागि डाक्टर पठाउने हैसियदमा आफूलाई उभ्याउने बाटोमा हिँडेको छ ।